छि ! रेडक्रसको घिनलाग्दा हकर्बद, आफ्नालाई जागीर खुवाउन प्रश्न पत्रनै फरक ? — Motivatenews.Com
छि ! रेडक्रसको घिनलाग्दा हकर्बद, आफ्नालाई जागीर खुवाउन प्रश्न पत्रनै फरक ?
काठमाडौं – नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको घिनलाग्दो हर्कद बाहिरिएको छ । अघिल्लो बर्ष रेडक्रसले परीक्षा लिएर छैटौं तह लेखा अधिकृत नियुक्ति गर्दाखेरी लिइएको परिक्षामा आफ्ना मान्छेलाई जागीर खुवाउन प्रश्न पत्रनै फरक दिइएको पाइएपछि उसको घिनलाग्दो हर्कद छताछुल्ल भएको हो ।
एउटा २० अंकको बाहेक अरू प्रश्न भने दुवैमा मिल्छन् । द्वितीय पत्रको नेपाली खण्डको १ नम्बरमा एउटा प्रश्नपत्रमा आन्तरिक लेखा परीक्षणबारे प्रश्न । अर्कोमा अन्तर्रा्ष्ट्रिय व्यापारबारे ।
प्रश्न फरक बन्नुको प्रकरण भने गम्भीर छ । छैटौं तहको लेखा र प्रशासनको परीक्षा उही दिन उही समय (२०७५ असार २ गते बिहान ८ बजेदेखि) भएको थियो । प्रशासनको एक प्रतिस्पर्धीलाई लेखा समूहको, त्यो पनि फरक प्रश्न दिइयो । उनको परीक्षा बिग्रियो । उनलाई षड्यन्त्रपूर्वक असफल गराएर सफल बनाइयो तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जीव थापाकी भतिजी प्रतीक्षा थापालाई ।
उनी सञ्जीवका कान्छा भाइ राजीवकी छोरी हुन् । राजीव उदयपुरमा रेडक्रस उपशाखाका सभापति छन् । ती परीक्षार्थीलाई प्रशासनकै प्रश्न परेको भए थापाले सम्भवतः पास गर्ने थिइनन् ।
यसबारे रेडक्रस केन्द्रीय पदपूर्ति समितिका तत्कालीन सभापति सुरेन्द्र ऐरले फरकफरक प्रश्नपत्रको प्रकरण स्वीकारे । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा छ ।